Covid-19 : Hanampy ny Filoham-pirenena i Romain Pierrot Delphin
Vous êtes ici: Accueil → Faits-Divers → 2020 → août → 3 → Covid-19 : Hanampy ny Filoham-pirenena i Romain Pierrot Delphin
Redaction Midi Madagasikara 3 août 2020 5 Commentaires
Raha sahirana amin’ny fitadiavana fanafody na fanefitra hiadiana amin’ny aretina COVID-19 ny fitondram-panjakana ankehitriny, dia manolo-tànana azy Atoa Romain Pierrot Delphin, zatovolahy roapolo taona mipetraka any amin’ny fokontany Ambodinivato distrikan’i Mahanoro.
Fibebahana sy fitondrana ny lokon’ny sainam-pirenena.
Ho an’ny kristiana dia tsy tongatonga ho azy izao areti-mandoza izao, fa vokatry ny fihodinantsika amin’Andriamanitra. Manoloana an’izany hoy ity tovolahy izay milaza fa irany ity, dia mila mibebaka ny Malagasy rehetra. N’iza n’iza. Nahazo iraka avy any an-danitra aho , hoy izy, ary mitohy foana izany hatramin’izao. Io fibebahana io dia tsy maintsy atao, ary hamafisiko amin’ny Filoha io. Kristiana loterana izy, ary vita batisa. Raha vao naharay an’ilay antso avy any an-danitra dia tsy nisalasala, fa dia nanatanteraka izany folo andro lasa izany ka nandeha kilaometatra an-jatony maro niala ny tanànany. Nivarotra vary telo gony izy hamatsiany ny diany ary niroso avy hatrany . Mofo gasy , mofo lava(mofo dipaina )no sakafony teny an-dàlana ary rano mangatsiaka sy limonady anglisy( bonbon anglais) no fisotrony . Tsy nahatsiaro harerahana mihitsy aho teny an-dàlana ,hoy izy, raha nitafa taminay teny Mahazo, ny Asabotsy hariva teo , niaraka tamin’ireo polisy mpandamina fifamoivoizana teny , satria hatramin’izao dia mbola manome hafatra ahy foana Andriamanitra. Ho antsika vahoaka Malagasy, dia mitondrà ny lokon’ny sainam-pirenentsika ireo isika ( fotsy, mena , maitso) fa tsy handaitra amintsika io valanaretina io . Ity tovolahy ity, dia manao T-shirt maitso sy kilaoty maitso ary anaty kitakokeliny fotsy , dia ahitana lamba firakotra fotsy sy kilaoty mena l
Mahalasa eritreritra ihany ity zavatra ataon’ity tovolahy ity izao, satria dia an-tongotra an-jatony kilaometatra no vitany, ary ny finoany dia matanjaka tokoa amin’ny tsy maintsy hihaonana amin’ny Filoha Andry Rajoelina mba ho fanampiana azy hiady amin’ny valanaretina COVID-19.
j.Rakoto de Paris 3 août 2020 at 20 h 52 min · Edit
Loza be ho an’ny vahoaka ity aretina ity ,ka raha izy no manana ny fanalahidiny ,inona no tsy tokony an draisan’ny filoha azy ? Asaina maka douche tsara izy alohan’ny hiakarany ao an dapa ,savaina daholo ndrao misy fiadiana sy ny ody isan karazany .,ary homena sakafo tsara izy mba havitrika ,satria tsy mora ny handresy lahatra ny ao an dapa .
Izaho manokana aloha dia misaotra azy fa fitiavana sy fandavan tena lehibe no nataony .
Ralytha 3 août 2020 at 16 h 49 min · Edit
Rediredy ndralakamisy izao Mitovy any Joanna Tsy mbola misy nahita fanafody mahasitrana ny coronavirus hatreto eratany. Aza mivarotra saka be loha. Ny covid organics aza tsy maha sitrana Aiza izao ilay gélule 💊 Tsy misy dikany ny fianarana @ny sasany. Manaraotra paty ianareo. Manao tsindrio fa lavo
Vavolombelona 3 août 2020 at 16 h 13 min · Edit
Sady tsy naniraka an’iza an’iza hono Izy e!
Mateza 3 août 2020 at 10 h 36 min · Edit
Nahoana ilay zalahy no tsy maintsy hihaona amin’drajoely hanampy azy hanasitrana ny Malagasy ?
Voatery nivarotra vary 3 gony mba hiantohana ny dian-tongotra an-jatony kilometra maro ?
Voatery mihinana mofo gasy sy mofo dipaina amin’ny rano mangatsiaka na limonady ?
F’angaha rajoely nangataka fifanampiana taminy ? Afaka handray azy sy ny lotony ? sns….
Nahoana no tsy ny manodidina azy ao an-tanàna, na ny olona marary avy hatrany no
sitraniny raha niràhan’ Antra tokoa izy ?
Misy délira vinany ihany izy izany an !!!
Mariana 3 août 2020 at 9 h 15 min · Edit
Efa nahita fanafody fanefitra sady mitsabo ny covid19 ny fitondrana dia ny cvo. Koa dia mazotoa misotro ry Malagasy isany! Ny tsy fisotroanareo an’io hono no mankarary anareo, hoy ny lehibe!